गोरेले भने जस्तो सुन काण्डको सबै रहस्य खुल्ला ?अदालतमा एसएसपी श्याम खत्री को बयान सुरु, » खबरहरुको एउटै केन्द्र
बिहीबार, जेष्ठ १७, २०७५ १४:३९ मा प्रकाशित !
विराटनगर । साढे ३३ किलो सुन तस्करी काण्डमा मुछिएर फरा रहेका निलम्बित प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षक (एसएसपी) श्याम खत्रीको बयान शुरु भएको छ । खत्रीले आत्मसमर्पण गरेपछि जिल्ला अदालत, मोरङमा बयान शुरु भएको हो ।
एसएसपी खत्रीले अाज (बिहीबार) जिल्ला अदालत, मोरङमा आत्मसमर्पण गरेका हुन् । उनको खोजीमा अन्तर्राष्ट्रिय प्रहरी संगठन (इन्टरपोल)मा डिफ्यूजन नोटिस समेत जारी भएकाे थियो । सुन तस्करीमा संलग्न रहेको आरोपमा जिल्ला अदालत मोरङमा मुद्दा चलाइए पनि बयानका लागि उपस्थित नभर्इ फरार भएपछि खत्रीलार्इ खोज्न १९२ देशका प्रहरीमार्फत वारेन्ट जारी गरिएकाे हाे ।
यही जेठ आठ गते मङ्गलबार सुन तस्करी र सनम शाक्य हत्याकाण्डमा मुख्य अभियुक्त बनाइएका चुडामणि उप्रेती ‘गोरे’लार्इ सिआर्इबी टोलीले पक्राउ गरी सार्वजनिक गर्ने अघि लिएको बयानमा गारेले एसएसपी श्याम खत्री पक्रनु होस् सबै रहस्य खुल्छ भनेका थिए ।
बयानमा आफू भन्दा ठूलो सुन तस्कर अरू नै भएको गोरेले बताएका थिए । उनले अाफूले विमानस्थलमा प्रहरी र एयरलाइन्सका कर्मचारीसँग सेटिङ मिलाएर सुन ल्याउने काम मात्रै गरेको बताएका थिए । गोरेले बयानमा भनेका थिए – ‘मेरा बारे मात्र धेरै कुरा आए। मलाई मुख्य मान्छे भनिएको छ, म नै ठुलो मान्छे होइन, म भन्दा माथि काम गर्ने अरू पनि छन् । उनीहरूको बारेमा पनि खोल्नुपर्छ।’
गोरेले बयानको प्रारम्भिक चरणमा नै एसएसपी श्याम खत्रीलाई पोलेका थिए । एसएसपी खत्रीलाई पक्राउ गरे सुन तस्करीको माथिल्लो कनेक्सस खुल्ने उनकाे दाबी थियाे ।
सुनकाण्डमा एसएसपी श्याम खत्रीको संलग्नता देखिएपछि छानबिन समितिले वैशाख पहिलो साता बयानका लागि पत्र काटेको थियो । तर, बयानका लागि नगएका उनी फरार भएका थिए ।
एसएसपी खत्रीको बयान आजबाटै शरु भएको छ । अब गोरेले भने जस्तै सुन काण्डको सबै रहस्या खुल्ला ? यो पश्न खडा भएको छ । अब एससपी खत्रीले पनि सुन काण्डको सबै रहस्या नखुलाए कसलै खुलाउला ?
PREVIOUS POST Previous post: अवैधरुपमा रकम असुल्दै बिरगंजका नगर प्रहरी
NEXT POST Next post: धुर्मुस–सुन्तली र पल शाहले बनाए यस्तो रेकर्ड (भिडियोसहित)
बस दुर्घटना, एकको मृत्यु, आधा दर्जन बढी घाइते बिहीबार, जेष्ठ १७, २०७५ १४:३९
प्रधानन्यायाधीशमा चोलेन्द्रशमशेर जबराको नाम सिफारिस बिहीबार, जेष्ठ १७, २०७५ १४:३९
नेकपाले न्यूरोडमा लगायो डोजर, यस्ता छन् ६ कारण बिहीबार, जेष्ठ १७, २०७५ १४:३९
निर्वाचित रेशमलाई जेल कोचेर ठूलो अन्याय : नेतृ हिसिला यमी बिहीबार, जेष्ठ १७, २०७५ १४:३९
निर्मला हत्या प्रकरणः प्रदीप-विशाल पनि दिलिपजस्तै ‘नक्कली’ अभियुक्त ? बिहीबार, जेष्ठ १७, २०७५ १४:३९